အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Thetoo - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုသက်ဦး အကုန်လိုက်မပြင်နေနဲ့ ကျွန်တော် စာလုံးပေါင်းမှားနေတာ မြင်ရင် တစ်လုံးလောက်ပြင်လိုက်ရင် ကျန်တာ ကျွန်တော် ရှာပြီးအကုန်လိုက်ပြင်လိုက်မယ်။ ကွားခြားချက်ပေါ်ကြည့်ပြီး ဘာတွေမှားနေတယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်မယ်။ ကျေးဇူး။ မတွေ့ရတာတောင် ကြာပါ့.Hteink.min ၁၉:၃၅၊ ၂၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၂ (UTC)
အိုကေ၊ ဖင်လန်မှာ နှင်းတွေကျနေပြီလား။ --Thetoo ၁၉:၄၃၊ ၂၃ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၂ (UTC)
၃ Global account
၄ Participate in the Ibero-American Culture Challenge!
၅ ESEAP Conference
၆ File:SayaChit.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ
၇ Translation request
မင်္ဂလာပါဗျာ။ ကျွန်တော် ဝီကီနဲ့ ဝေးကွာနေတာကြာတော့ အသစ်လိုဖြစ်နေတယ်။ အခုတလော တတ်နိုင်သလောက် စာလေးတွေရေးနေပါတယ်။ တစ်ချိုကိစ္စလေးတွေ တိုင်ပင်ချင်လို့ပါ။
Yes, What can I do for you? My email is thetoodk@gmail.com
Hi Thetoo! AsaSteward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't haveaglobal account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (talk) ၂၂:၁၃၊ ၁၆ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၅ (UTC)
Hugs!--Anna Torres (WMAR) (ဆွေးနွေး) ၁၃:၅၈၊ ၁၀ မေ ၂၀၁၆ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Wirjadisastra (ဆွေးနွေး) ၀၂:၅၂၊ ၁၄ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
File:SayaChit.jpg ၏ ဖိုင်ရင်းမြစ်နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပြဿနာ[ပြင်ဆင်ရန်]
File:SayaChit.jpg ဖိုင်ကို upload တင်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုဖိုင်တွင် မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေနှင့် ရင်းမြစ်များ လိုအပ်နေပါသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည် မူပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးဂရုပြု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင် upload တင်ခဲ့သည့် အခြားဖိုင်များကိုလည်း မှန်ကန်စွာ tag လုပ်ထားခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ ဖိုင်တင်ထားခဲ့သည့် မှတ်တမ်းများကို ဤနေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၀၇၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
Can you translate and upload the article en:Azerbaijanis in Burmese Wikipedia? It certainly does not need to be long and detailed.
Yours sincerely, Multituberculata (ဆွေးနွေး) ၁၀:၀၁၊ ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)[အကြောင်းပြန်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Thetoo&oldid=717537" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။